PVC mifono Gabion harato - China Hebei Samsung Metal Wire harato
PVC mifono Gabion harato
Ara-nofo ny PVC mifono gabion PVC mifono gabions, karazana harato tariby boaty, dia vita tamin'ny tariby netting mavesatra misy lafiny enina izay tenona ny vy tariby. PVC mifono gabions ny savaivony dia avy any ivelany ny 4.5mm 3.0mm, ary ny savaivony ny sisiny tariby na ny sisin'ny tariby iray habetsahan'ny tariby matevina noho ny mahazatra harato tariby. PVC mifono gabions dia vita amin'ny plastika mifono vy tafo tariby: avo lenta ambany karbaona vy tariby, dia entiny PVC sosona fiarovana eny ambony tafo vy tariby, ary avy eo manenona azy ...
Supply Fahaizana: 500 Set / Sets isan'andro
Ara-nofo ny PVC mifono gabion
PVC mifono gabions , karazana harato tariby boaty, dia vita tamin'ny tariby netting mavesatra misy lafiny enina izay tenona ny vy tariby. PVC mifono gabions ny savaivony dia avy any ivelany ny 4.5mm 3.0mm, ary ny savaivony ny sisiny tariby na ny sisin'ny tariby iray habetsahan'ny tariby matevina noho ny mahazatra harato tariby.
PVC mifono gabions dia vita amin'ny plastika mifono vy tafo tariby: avo lenta ambany karbaona vy tariby, dia entiny PVC sosona fiarovana eny ambony tafo vy tariby, ary avy eo dia misy lafiny enina manenona eo an-tariby netting anisan'izany ny fepetra arahana. Izany PVC sosona fiarovana dia afaka manamafy orina ny fiarovana avo tontolo iainana ny fandotoana. Mandritra izany fotoana izany dia afaka mifidy loko samihafa mba Tanteraho izay vitany ny tontolo iainana manodidina.
Ny ara-dalàna fepetra arahana ho an'ny PVC mifono gabion
Eo am-pamohana harato
Matetika ny savaivony dia avy ny 3.4mm 2.5mm
Size ny gabion
Hafa fepetra arahana avy amin'ny mpanjifa ihany koa ny misy.
Fampiharana ny PVC mifono gabions
Gabions ampiasaina amin'ny toe-javatra maro, anisan'izany ny stabilization ny hetsika eto an-tany sy ny fahasimban'ny, ony fanaraha-maso, tahirin, Canal refurbishment, zaridaina sy fihazonana rindrina, sns
Features sy tombontsoa ny PVC mifono gabions
PVC mifono gabions dia afaka mitondra ny mafy Lalina ary extruding hery sy hitandrina ny bikan'ny. Gabions dia mora ampy ny fametrahana fa tsy misy traikefa ilaina mba hahazoana vokatra tsara. PVC mifono vy ivelan'ny tafo tariby, PVC mifono gaions no tsara in harafesiny hery hanoheran'ny, antioxidation, mateza, tamin'izany andro izany PVC gabion mifono tsara tarehy kokoa noho ny tsy PVC mifono. Afaka mitovy izany amin'ny tontolo iainana ny manodidina ary manao ny olona kokoa ny aina.
Previous: Nandrisika Gabion harato
Manaraka: U Type Wire
Nandrisika welded Gabion harato
Nandrisika Gabion harato